Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah
Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah sano 3 6 bilood ka hor #2
I'am raadinayso qof la heli karo si ay u koraan iyo daryeel this forum cusub Ingiriisi. Waxaad noqon doontaa maamule iyo Haguhu ah in waqti isku mid ah, kuu dhisi doonaa gole ka dhulka; isagoo intaa ku daray category, qoraalka iyo wixii la mid ah, waa inaad haysataa waqti qaar ka mid lacag la'aan ah, waana taas daraaddeed.
- Waxaad ku hadlin Ingiriisiga sida hooyo ama ku dhawaad
- Waxaad ka shaqayn marka aad haysato waqti, waayo, sida iskaa wax u qabso
- Waxaad jeceshahay Flight lagtiisa oo dabcan
- Waxaad tahay kor ku 18 sano jir
- Waxaad tahay oo halis ah
Waan idin caawin doonaa, waayo, arin kasta farsamo ama codsi horumar, laakiin inta badan waqtiga shaqadaada on adiga kuu gaar ah, waxaad samayn kartaa kooxda gaarka ah ee Moderators haddii aad rabto.
Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah sano 3 6 bilood ka hor #4
diyaar u ah inay qaataan booska this Waxaan ahay.
Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah sano 3 6 bilood ka hor #5
Waad ku mahadsan tahay, waxaan kuu soo diray email ah in aad. Fadlan ka jawaab by Email.
Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah sano 3 5 bilood ka hor #32
Ma waxaad wali raadinaysaa? Maxaa yeelay, haddii aad tahay waxaan ahay oo dhan. Ka hor Military, waayo-aragnimo Haguhu forum ka hor, waxaan ka shaqeeyaan duulista iyo waxaan ahay ruqsad ah & p makaanik la jaceeylka a duulista halis ah. La simming tan 2003.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray superskullmaster. Sababta: Maandooriyaha
Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah sano 3 5 bilood ka hor #34
Aniga ahaan maahan inaan dul saarno FSX waa naadir
Waxaan la Rikooo for um ya aan hubin sida dheer hadda, laakiin gabi ahaanba jeclaataa goobta, oo ka kooban
diyaar u ah inay iskaa Waxaan ahay
Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah sano 3 5 bilood ka hor #38
Aad ayaad u mahadsantahay for isagoo iskaa wax u qabso, waxaad tahay mid aad u soo dhawaynayaa halkan, waxaan la xiriiray Dariussssss (maamulaha forum cusub) oo ku saabsan magacyada musharaxiinta aad, ee aan hadda u baahan tahay in la dhiso ilaa koox cusub ee Moderators. Waxaan ka heli doontaa ka dib markii la taabto aad la si deg deg ah.
Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah sano 3 5 bilood ka hor #45
Nice in aad dhan iyo soo dhaweyn kulmaan si ay Rikoooo Forum. Waad ku mahadsan tahay xiisaha qabtaan xilal kuwan. Waxaan la xiriiri doonaa mid kasta oo idinka mid ah via e-mail. Ka dib markii in, waxaan ku dhawaaqi doonaa xubnaha cusub ee kooxda admin ah.
Mar labaad, soo dhaweyn si Rikoooo.
Rikoooo ayaa raadineysa Haguhu iskaa wax u qabso ah sano 3 5 bilood ka hor #47
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiino inaad qorto oo diyaarad Qabille oo aad u badan oo aqoon u leh. Taasi waxay naga caawin doontaa ogaado kan waa qofka ugu fiican in la soo kiraystay sida Haguhu iskaa wax u qabso halkan a. Haddii aad leedahay qaar ka mid ah dunida dhabta ah waayo-aragnimo duulista, ama aad duulaya adkaaday kale horyaalka, si xor ah u nala soo socodsii.
Like waxaan is-idhi, waxa uu naga caawin doonaa wax badan.
aad oo dhan ku mahadsan tahay.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.254